Home | 24 Naryee
1200000.00 Kyat Ks
Mingalartaungnyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) (Yangon (ရန်ကုန်))
4K Sony Handycam wth Projector 100% New
4K Sony Handycam wth Projector 100% New 4K 3840 × 2160 Video Resoulation. 120X Zoom Photo 20.6 Mega Pixel 20X 120X Zoom Build In Projector. HDMI IN / OUT Resoulation. Wifi / NFC Sharing / Control (PC) ( Smart Phone ) XAVC S MP4 4K / XAVC S Full HD / ...
95000.00 Kyat Ks
Mingalardon (မင်္ဂလာဒုံ) (Yangon (ရန်ကုန်))
Sony Remote Control Shooting Grip Mini Tripod 100 % New
Sony Remote Control Shooting Grip with Mini Tripod 100% New Order from Amazon USA For Sony Handycams Update HD and 4K Cameras Digital Cameras Cybershot Series Updated Alpha A mount E mount DSLR Cameras Nex34567Mirrorless HD and 4K Cameras Alpha...
450000.00 Kyat Ks
SONY Handycam with Projector 100 % New
Sony Handycam ရဲ့ Specifications တှေ ကတော့ အထှအေထူး မပွောလိုတော့ပါဘူး ပိရိုဂကျြတာ လေးပါလို့ ပေ ၁၀၀ အကယျြကွညျ့လို့ရတယျဗြာ ရိုကျကူးထားတာတှပွေနျကွညျ့လို့ရတယျ အပွငျ Inputတှပေါရတယျ လေ ကှနျပြုတာလပျတော့တို့ Blu-Ray စကျတို့ ဖုနျးတို့ ကနေ HDMI out ကနေ ပွနျကွည...
375000.00 Kyat Ks
SONY Full LED HD 46 inch TV 95% OK 100% Working, No Error. ( Made in Japan )
SONY Full LED HD 46 inch TV 95% OK 100% Working, No Error. ( Made in Japan ) Model KDL-46EX700 Slim Body. Aluminium and Plastic Front Body Frame. Back Side Iron Frame. Full HD Full LED Premium Version. 1920*1080 P,4HDMI,2RCA Jack, 1 VGA, 1 Optica...
3700.00 Kyat Ks
Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) (Yangon (ရန်ကုန်))
သဘာဝကပေးသော ငှက်သိုက်အားဆေး ရေနွေးထည့်ရုံနဲ့အသင့်သောက်သုံးနိုင်သောငှက်သိုက်
200000.00 Kyat Ks
Insein (အင်းစိန်) (Yangon (ရန်ကုန်))
Sony Xperia XA1 Plus - Black
Sony Xperia XA1 Plus - Black RAM4GB, 32 GB, external sd စိုက်လို့ရတယ်။ Official warranty 8 လ ကျန်သေးတယ်။ ၀ယ်ထားတဲ့ ဘောင်ချာ အစယ ဘူးအဆုံး၊ နားကြပ်ရော စီလီကွန်ကာဗာပါ ပစ္စည်းအစုံရှိပါတယ်။ ဖုန်းအနာအဆာ ဘာမှမရှိယ နောက်ဆုံးဗားရှင်း update လုပ်ပြီါ်သား၊ erro...
34500.00 Kyat Ks
Golf ( portable intelligent headset ) GF - MX02
Loudspeaker 40mm Frequency 20Hz~20kHz Seneitivity 102±dB Impedance 32Ω Distortion rate ≤2.5%THD Max Power 150mW Microphone 6.0x 5.0mm Plug 3.5mm Length 1.9m Additional shipping fees will be charged Ph : 09456315508,09456315509
31500.00 Kyat Ks
Golf (USB Digital Headphones) GF - MX01
Loudspeaker 40mm Frequency 20Hz~20kHz Seneitivity 102±dB Impedance 32Ω Distortion rate ≤2.5%THD Max Power 150mW Microphone 6.0x 5.0mm Plug USB 3.5mm Length 2.2m Additional shipping fees will be charged www.24naryee.com Ph : 09456315508,09456315509
Classic Lighter Code : 001551 Price : 11000 Kyats Lighter အနေနဲ့ရော Spinnal အနေနဲ့ပါ သုံးလို့ရတော့ လူငယ်တွေ အကြိုက်ပေါ့နော်.....ချစ်ခင်နှစ်သက်ရသူတွေထဲက ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူရှိရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့။ ======================================= Th...
Flamingo Lighter Product Code No:001550 Price : 10000 Kyats ဒီဇိုင်းလန်းလန်းနဲ့ စတိုင်ထုတ်ချင်သူများ အတွက်တော့ ကွက်တိပဲနော်.... Battery Charger ကို USB နဲ့အားသွင်းရုံပါပဲ။ မီးညှိ Coil တစ်ခု အပိုပါရှိတဲ့အတွက် Coil လောင်သွားမှာကို စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။ ...
9000.00 Kyat Ks Kyat Ks
" ပြည့်စုံသပ်ရပ်လှပတဲ့ smokey eye တစုံကိုရရှိရန်မှာ Set ထဲမှာပါရှိသည့် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိအောင် ရွေးချယ်ထည့်သွင်းပေးထားသော eyeshadow အရောင်အသွေးလေးမျိုး၊ အလှဖန်တီးရှင်များ အသုံးပြုလေးရှိတဲ့ ရေမြှုပ်အမျိုးအစားနဲ့ စုတ်တံတို့က အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၁။အရေ...
75000.00 Kyat Ks
Grooming Set QG 3080
75000.00 Kyat Ks Kyat Ks
Power : Recharge System clean.The battery indicator displays the status , During Charging the LED flashes when the battery is fully charged, the LED lights green continuously.
395.00 LKs LKs
Description : Pearl white Toyota Alphard 2002 A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering Safety System : yes Airbag: Driver & Passenger Window: Power Windows,Tinted Glass,Rear Window Wiper Cassette : Radio,CD Player,Stee...
300.00 LKs LKs
အမှတ်(၂၅၄)၊မြို့သစ်(၆)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် မှန်ခန်း၊ ဒါဘာ၊ မြေညီထပ် ရှိ BCC ကျပြီး ဖြစ်၍ အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်ပါသည်။ (30% ပေးသွင်းယုံဖြင့်လူနေထိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကျန် 70% ကို 11 လပေးသွင်းခြင်းစနစ်ဖြင့်တိုက်ခန...
37000.00 Kyat Ks
မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် Shaver HQ 801/A
37000.00 Kyat Ks Kyat Ks
Battery shaver ,Independtly floating heads. Self-sharpening blades.Cordless battery shaver.
Tamwe (တာမွေ)Yangon (ရန်ကုန်)
10000.00 Kyat Ks Kyat Ks
79000.00 Kyat Ks
Rice Cooker HD 4515/66
79000.00 Kyat Ks Kyat Ks
Power : 940 W, Capacity : 1.8 L "Automatic Keep warm keeps rich fersh for " 12 hours. Multi-function programs foravarity of dishes. Fully detachable inner lid for easy cleaning, Easy to control cooking progress.
9600.00 Kyat Ks
Chocolate Nudes Eyeshadow Palette
9600.00 Kyat Ks Kyat Ks
အသားရောင်မှ အညိုရင့်ရောင်အထိ အရောင် ၆ ရောင်ကို ၁ ဗူးထဲမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နူးညံ့တဲ့ အိုင်းရှဲဒိုးက matt ပုံစံ ခပ်မှုန်မှုန် သိပ်သိပ် ကလေးမှ အလက်ကလေးများပါတဲ့ အိုင်းရှဲဒိုး အထိ ပုံစံမျိုးစုံ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝဆန်ဆန်နေ့စဉ်အပြင်အဆင် သို့မဟုတ် ရင်ခုန်ဖ...
Exo Travel မှ လုပ်ငန်း နှစ်၂၀ အတွင်းအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရိုးသား၍ကြိုးစားသော ၀န်ထမ်းများအား လက်တွဲ၍ အောင်မြင်မှုများကို မျှဝေခံစားလိုသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားလိုသူများ အမြန်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Position : Ev...
အဲကွန်း နှင့် ရေခဲသတ္တာ